DAAWO-Puntland oo Qaaday Tallaabo Aysan Ku Farxin Muqdisho & Hargeysa”Wadahadalada Somalia iyo Somaliland Waa Inaan Ka Qayb-gallaa Haddii Kale..”
Puntlandnews.net (Garoowe)-Dowladda Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanayd qorshe ay dib ugu bilaabayso dhex dhexaadintii laga dhex wadey maamulka Somaliland iyo dowladda federalka ah ee Soomaaliyeed.
Wada xaajoodyadaan oo marar badan fashilmay laguna guuldaraystay in dib laysugu keeno labada dhinac ayaa waxaa loo magacaabay wakiilo cusub waxaana socdey dedaalo dheeraad ah oo Turkiga iyo daneeyayaasha Soomaaliya ku doonayaan inay dib ugu bilaan wada hadalada labada dhinac.
Haddaba Puntland oo qayb ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya haseyeeshee saamayn badan kuleh Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bariga iyo waqooyiga Soomaaliya ayaa war ka soo saartay wada-hadalada u dhexeeya Soomaaliya iyo xukuumadda Hargaysa.
Puntland oo Somaliland ay aad ugu murmaan maamulka gobolada Sool, Cayn iyo Sanaag ayaa sheegtay in ay waajib tahay in laga qaybgeliyo wada hadalka labada dhinac maadaama cidda ay sida rasmiga ah isu hayaan ay iyada tahay isla markaana dadka ay sheeganayso inay kamid yihiin ay degan yihiin Puntland aysanna doonayn inayn ka baxaan Soomaaliya.
Waa ila sax hadalka lagasoo sheegay maamulka puntlaan ee ah shirka la filayo in uu dhexmari doono xamar iyo Hargeeysa waa in ay puntaan goob joog ka tahay.Sababtoo ah puntlaan iyo S.laan buu ka dhaxeeyaa muran dal iyo dadba.Waxaa jira dad badan oo soomaali ah oo markay maqlan waxaa wada hadlaya soomaaliya iyo soomsaalilaan u qaba in laga wada hadlayo soomaalilaan ha ku soo noqoto soomaaliweeyn.Taas kaliya xaajdu ma aha ee waxaa kaloo laga wada hadlayaa dadka ku abtirsada haybta puntlaan ee ay hargeeysa ku haysato jajuubka iyo caburinta.Taas haddii an xal loo helina xaajadu waxay gaari doontaa Mar iyo meel an waxba laga qaban doonin.
puntland waa dhibka haysta somal